Doppel herz amavithamini eziguli ezinesifo sikashukela > Ukwelashwa nokuvimbela
I-Doppelherz - Amavithamini ama-Diabetesics
Isifo sikashukela yisifo se-endocrinological esingamahlalakhona esiqhubeka ngenxa yokushoda kwama-pancreatic hormone. Lesi sifo sinezinhlobo ezi-2.
Ekwelapheni i-mellitus yesifo sikashukela, kuvame ukusetshenziswa izinhlobo ezikhethekile zamavithamini. Lokhu kungenxa yokuthi bafaka izinto ezinamaminerali ezidingeka kakhulu ezigulini.
Umuthi omuhle kakhulu walolu hlobo ngama-Doppelherz Asset amavithamini ezigulini ezinesifo sikashukela. Lo muthi uyatholakala ngesimo samathebulethi okusetshenziswa kwangaphakathi. Umuthi lo ukhiqizwa yinkampani yaseJalimane iKvayser Pharma. Uthole neDopel Herz Asset evela enkampanini ethi "Vervag Pharm." Isimiso sokusebenza nokwakheka kwemithi siyefana.
Izindleko nokwakheka kwalo muthi
Iyini intengo yezimbiwa zezimbiwa zeDoppel Herz? Intengo yalo muthi ngama-ruble angama-450. Iphakethe liqukethe amaphilisi angama-60. Lapho uthenga umuthi, awudingi ukuletha umuthi ofanele.
Yini ingxenye yesidakamizwa? Imiyalo ithi ukwakheka kwalo muthi kufaka phakathi amavithamini E42, B12, B2, B6, B1, B2. Futhi izingxenye ezisebenzayo zomuthi yi-biotin, i-folic acid, i-ascorbic acid, i-calcium pantothenate, i-nicotinamide, i-chromium, i-selenium, i-magnesium, ne-zinc.
Indlela yokusebenza yesidakamizwa imi kanje:
Amavithamini e-B asiza ekuhlinzekeni umzimba ngamandla. Futhi, lezi zinto zibhekene nokulingana kwe-homocysteine ​​emzimbeni. Kusungulwe ukuthi ngokudla okwanele kwamavithamini avela eqenjini B, uhlelo lwenhliziyo luyathuthuka futhi nokuzivikela komzimba kuyaqiniswa.
I-Ascorbic acid ne-Vitamin E42 zisiza ukususa ama-radicals mahhala ayingozi emzimbeni. Lawa macronutrients akhiwa ngamanani amakhulu kushukela. Ama-radicals wamahhala abhubhisa ulwelwesi lweseli, ne-ascorbic acid ne-Vitamin E42 enza ukuba imiphumela yawo ibe yingozi.
I-Zinc ne-selenium kuqinisa amasosha omzimba. Lokhu kubaluleke kakhulu kwisifo sikashukela sohlobo 2. Futhi, lezi zinto zokulandelela ziwuthinta kahle umsebenzi wohlelo lwe-hematopoietic.
I-Chrome. Le macronutrient ibhekele ushukela wegazi. Kutholakale ukuthi lapho kudliwa i-chromium eyanele, izinga likashukela wegazi liyazinza. Futhi, i-chromium isiza ukunciphisa ingozi yokuhlakulela i-atherossteosis, isuse i-cholesterol futhi iqede ama-cholesterol plaques.
Magnesium Le nto inciphisa umfutho wegazi futhi iqinise uhlelo lwe-endocrine luphelele.
I-Folic acid, i-biotin, i-calcium pantothenate, i-nicotinamide ziyizinto ezisizayo.
Lawa amaminerali abalulekile kwabanesifo sikashukela njengoba besiza ukujwayela ukusetshenziswa kwe-glucose.
Ungawathatha kanjani amavithamini eziguli ezinesifo sikashukela i-Doppelgerz Asset? Uma kwenzeka unesifo sikashukela esincike ku-insulin (uhlobo lokuqala) kanye nesifo sikashukela esinga-insulin (uhlobo lwesibili), umthamo uhlala unjalo.
Umthamo ofanele wansuku zonke yi-1 ithebhulethi. Udinga ukuthatha umuthi ngokudla. Isikhathi sokulashwa kokwelashwa siyizinsuku ezingama-30. Uma kunesidingo, inkambo yokwelashwa ingaphindwa ngemuva kwezinsuku ezingama-60.
Kuyaqapheleka ukuthi umuthi unezinombolo eziningi zokuphikisana okufanele zisetshenziswe. Awungeke usebenzise i-Doppelherz Asset yesifo sikashukela:
Abantu bayayengwa yizakhi ezakha umuthi.
Kuyaqapheleka ukuthi amaminerali abantu abanesifo sikashukela kufanele aphathwe nezidakamizwa ukwehlisa ushukela. Ngesikhathi sokwelashwa, kuyadingeka ukuqapha izinga le-glucose egazini.
Ingabe i-Doppelherz Active inayo imiphumela emibi? Ukuchazwa kwomuthi kukhombisa ukuthi lapho usebenzisa amaphilisi, ukuvela komzimba noma amakhanda kungakhula.
Ezimweni ezingama-60-70%, imiphumela emibi ikhula nge-overdose.
Ukubuyekezwa kanye nokufana komuthi
Kuthiwani ngamavithamini wezibuyekezo sikashukela se-Doppelherz? Cishe zonke isiguli ziyaphendula kulo muthi ngendlela efanele. Abathengi bathi uma bethatha lo muthi, bazizwa bengcono futhi amazinga abo kashukela egazini azinza.
Odokotela nabo baphendula kahle ngomuthi. I-Endocrinologists ithi amaminerali abantu abanesifo sikashukela abaluleke kakhulu, ngoba aba nomthelela ekukhululeni kwezimpawu ezingezinhle ze-pathology. Ngokusho kodokotela, ukwakhiwa kwesidakamizwa i-Doppelherz Asset kufaka zonke izinto ezidingekayo empilweni ejwayelekile.
Ngabe lo mqondo unaziphi izifanekiso? Enye indlela engcono kakhulu yi-Alphabet Diabetes. Umuthi wenziwa eRussia Federation. Umenzi wayo yiVneshtorg Pharma. Izindleko zesifo sikashukela i-Alphabet singama-ruble angama-280-320. Iphakethe liqukethe amaphilisi angama-60. Kuyaqapheleka ukuthi kulo muthi kunezinhlobo ezi-3 zamathebulethi - amhlophe, aluhlaza okwesibhakabhaka no-pink. Ngayinye yazo ihlukile ekubumbeni.
Ukwakheka kwamathebulethi kufaka:
Amavithamini eqembu B, K, D3, E, C, H.
Blueberry ihlumela akhiphe.
Ukukhishwa kwezimpande ze-Dandelion.
Umuthi usiza ukuguqula ushukela wegazi kanye ne-cholesterol. Futhi, lapho usebenzisa umuthi, uhlelo lokujikeleza kwegazi luyazinza. Ngaphezu kwalokho, i-Alphabet Diabetes kunciphisa ubungozi bama-cholesterol plaque futhi iqinisa amasosha omzimba.
Noma yimuphi umuntu onesifo sikashukela sohlobo 1 noma uhlobo 2 angawusebenzisa umuthi. Imiyalo ithi nsuku zonke udinga ukuphuza ithebhulethi enye yombala ohlukile. Kulokhu, phakathi kwemithamo, isikhathi sokusebenza samahora angama-4-8 kufanele sigcinwe. Isikhathi sokulashwa kokwelashwa siyinyanga eyi-1.
Contraindication nokusetshenziswa kwesidakamizwa Alphabet Diabetes:
Ukungezwani komzimba kwizakhi zomuthi.
Iminyaka yezingane (kuze kube iminyaka eyi-12).
Lapho usebenzisa amaphilisi, imiphumela emibi ayenzeki. Kepha nge-overdose, kunengozi yokuvela komzimba. Kulokhu, ukwelashwa kufanele kuphazanyiswe bese kuthi isisu siqhume.
I-analogue enhle yamavithamini Doppelherz Asset yiDiabetesiker Vitamine. Lo mkhiqizo wenziwa yinkampani yaseJalimane iVerwag Pharma. Awungeke uthenge umuthi emakhemisi. I-Diabetesiker Vitamine ithengiswa online. Intengo yalo muthi ngama- $ 5-10. Iphakheji liqukethe amaphilisi angama-30 noma angama-60.
Ukwakheka kwalesi sidakamizwa kufaka phakathi:
Amavithamini eqembu B.
Umuthi usetshenziswa ekwelapheni abantu abahlushwa isifo sikashukela sohlobo 1 nohlobo 2. I-Diabetesiker Vitamine nayo isetshenziswa njenge-prophylactic uma kunethuba lokuthuthukisa i-hypovitaminosis.
Umuthi usiza ukuguquguqula amazinga kashukela emzimbeni futhi uzinze umfutho wegazi. Futhi, umuthi usiza ukwehlisa i-cholesterol yegazi futhi uvimbela ukwakheka kwama-cholesterol plaques.
Ungawuthatha kanjani umuthi? Imiyalo ithi umthamo ophelele nsuku zonke yithebhulethi eyi-1. Udinga ukuthatha umuthi izinsuku ezingama-30. Uma kunesidingo, kuyothi emva kwenyanga kwenziwe inkambo yesibili yokwelashwa.
Phakathi kokuphikisana nokusetshenziswa kwe Diabetesiker Vitamine yilezi:
Ukungezwani nezinto ezakha umuthi.
Uma usebenzisa amaphilisi, imiphumela emibi ayiveli. Kepha nge-overdose noma ukuba khona kwe-hypersensitivity ezingxenyeni zemithi, kungavela ukungezwani komzimba. Ividiyo ekulesi sihloko izonikeza imininingwane ngamavithamini kwabanesifo sikashukela.
Ungayibona kanjani i-hypovitaminosis
Izimpawu zokuqala ze-hypovitaminosis kuma-diabetesics:
ukungahambi kahle, ukungazinzi kwemood,
isikhumba esomile kanye ne-pigmentation,
fragility izinwele nezinwele ipuleti.
Awukwazi ukulinda kuze kufike isigaba esibi kakhulu se-hypovitaminosis, kungcono ukuthi uqale uthathe ama-micronutrients ngokushesha. Amavithamini awalapheki ushukela, kepha amavithamini eziguli ezinoshukela ayadingeka.
Amavithamini ancibilikisa amanzi
Amagama Inani Imithombo
I-Thiamine B1 Ilawula i-glucose metabolism, yehlise izinga layo egazini. Kucaciselwe izinjongo ze-prophylactic zokunciphisa izinkinga Ukudla kwezilwane: inyama, ubisi, amaqanda. Ukudla kwezitshalo: ama-bernwheat kernels, ama-alimondi. Amakhowe
Riboflavin B2 Izinhlobo ze-metabolic processors, zibamba iqhaza ekwakhekeni kwamangqamuzana abomvu egazi, zivikela i-retina Imvubelo, ushizi wekotishi, uphizi oluhlaza, iklabishi, amantongomane, amaqanda, isinkwa, i-veal
Niacin B3 Kuyathinta uhlelo lwenhliziyo I-Buckwheat, ubhontshisi, isinkwa se-rye, isibindi
I-Pantothenic acid B5 I-vitamin-anti-stress, iqinisekisa ukusebenza kohlelo lwezinzwa, ilawula imetabolism Isibindi, izinso, ubisi.
I-Pyridoxine B6 Kuthuthukisa ukuzwela komzimba kwi-insulin, kulawula ukusebenza kwemithambo yegazi, isibindi Imikhiqizo yobisi, inyama yenkomo, amaqanda
I-Biotin B7 Yehlisa ushukela wegazi, inezakhiwo ezinjenge-insulin Amakhowe, amantongomane, zonke izinhlobo zeklabishi, inyama, isibindi, ushizi, isardine
I-Folic Acid B9 Ithinta ukushintshwa kwama-nucleic acid nama-molecule amaprotheni Cishe yonke imifino, izithelo, imifino
ICyanocobalamin B12 Ithinta ukusebenza kwesibindi, umzimba Isibindi, imikhiqizo yobisi, ushizi, amaqanda, inyama
Amavithamini eqembu B lesifo sikashukela ayingxenye ebalulekile yokudla komuntu.
IVithamini C ngesinye sezakhi ezibaluleke kakhulu zokudla kanye nezinto eziphilayo ezisebenzayo. Yehlisa izinqubo ezingezinhle ze-oxidative, ibambezela ukuthuthukiswa kwamabala, ikhulisa ukumelana komzimba ne-oxygen hypoxia, iqinisa amasosha omzimba. Imithamo engashadi neyansuku zonke inqunywa ngudokotela futhi kufanele ibhekwe ngokuqinile. Isimo semihla ngemihla sabanesifo sikashukela akufanele singeqi i-1 g ngosuku. I-Ascorbic acid ifinyelela umphumela omkhulu kakhulu wokwelapha ngenkathi uthatha i-tocopherol. Umthombo oyinhloko we-ascorbic acid ukudla kwezitshalo (amajikijolo, amakhambi, u-anyanisi, ama-citruse).
Impilo yamehlo nesifo sikashukela
Ku-diabetesics, umbono uvame ukungaphazamisi - i-rhinopathy, ikhathalogu, ukuthuthukisa i-glaucoma. Ukulimazeka okubukwayo, noma ubumpumputhe, kungenye yezinkinga ezingezinhle. Amavithamini ezamehlo anesifo sikashukela, esimiselwe njenge-prophylactic kanye ne-ejenti yokwelapha yalezi zifo, aqukethe:
Izinhlobo A, E, C,
trace element (, manganese, selenium, zinc),
izakhi zezitshalo (i-beta-carotene, ukukhipha i-blueberry, i-lutein, i-zeaxanthin).
Ama-pigments asuselwa ezitshalweni, i-zeaxanthin ne-lutein, avikela i-retina emisebeni ekhanyayo, anciphise ukubonakaliswa kwe-rhinopathy ne-glaucoma. Ukuwohloka ekusebenzeni kwezitho zombono kuvame ukuhlotshaniswa nokufana kokudla, ukudla okungenakuqina. Ngakho-ke, amavithamini wamehlo anesifo sikashukela, esimiselwe yi-endocrinologist, kumele athathwe ukuqinisa impilo yezitho zombono. Imboni yezemithi ikhiqiza amavithamini amehlo ezinoshukela wezingoma ezahlukahlukene, ovame ukuphelela ngezinto zokulandela.
Thayipha ushukela ongu-1 noshukela wamavithamini
Uhlobo lwe-1 isifo sikashukela mellitus (esencike ku-insulin) sihambisana nokukhiqizwa kwe-insulin enganele. Ngokuntuleka kwe-insulin, ukuthathwa koshukela kufakwa emzimbeni, umzimba ushintshela ekuqhekekeni kwamaseli wamafutha, okuholela ekunciphiseni isisindo. Yimiphi amavithamini kashukela ongahle ukuyiphuza, udokotela unquma. Amavithamini ohlobo 1 lwesifo sikashukela ahlukile ekubumbeni kwekhwalifikheshini nobungako.
Amavithamini ayinhloko ohlobo lwesifo sikashukela sohlobo 1 eRussia yi-Alphabet® Diabetes.
Thayipha isifo sikashukela sesi-2 kanye nama-vitamin complexes
Kuhlobo 2 lwesifo sikashukela i-mellitus, i-insulin ikhiqizwa ngamaseli we-pancreas ngokwesimo somzimba, kepha akwanele ukumunca okuqukethwe okweqile kwe-glucose okufika nokudla emzimbeni. Lolu hlobo lwesifo luvela ngemuva kweminyaka engama-45 kubantu abathambekele ekukhuluphele. Amavithamini ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 2 ayengezo ezibalulekile ekwelashweni kwezidakamizwa. Ngohlobo 2 sikashukela, kuyanconywa:
I-Tocopherol (ithuthukisa ukuhamba kwegazi kwi-retina).
I-Ascorbic acid (yandisa amandla e-vascular futhi inciphisa amathuba okuqhakambisa i-cataralog),
I-retinol (umzimba ovela ekuthuthukisweni kwezinkinga, ikhombisa izakhiwo ze-antioxidant, ithuthukisa ikhwalithi yombono).
Amavithamini wesifo sikashukela sohlobo 2, ikakhulukazi i-group B, enza kusebenze amandla e-metabolism, avikele ukungasebenzi kahle kwemithambo, aqinisekise ukusebenza kwama-neurons.
Amavithamini ohlobo lwesifo sikashukela sohlobo 1 nohlobo 2 sikashukela ngokuvamile angamalungiselelo ayinkimbinkimbi anezici zokulandela umkhondo.
Esikhathini sikashukela i-mellitus emzimbeni weziguli kukhona ukuntuleka kwama-Vitamin complexes kuphela, kepha futhi nezinto zomkhondo. Ngakho-ke, imboni yezemithi yethule ukwenziwa kwezidakamizwa eziyinkimbinkimbi.
I-Alphabet Diabetes iqukethe izingxenye ezingama-13 zamavithamini, ama-microelements (izinto eziyisishiyagalolunye), izinto zokwakha izitshalo (ama-blueberries, izimpande ze-burdock, i-dandelion). Le yinkimbinkimbi yenzelwe abasebenza ngesifo sikashukela ukuze kuthuthukiswe i-glucose metabolism, kanye nokuvinjwa kwama-pathologies ahlanganayo.
UVictoria S., oneminyaka engama-57 ubudala, ungumgcini mabhuku. Sekuyisikhathi esingaphezu konyaka ngithatha i-Alphabet Diabetes. Ngaqala ukuzizwa ngingcono, ubuthakathaka bunyamalala, umuzwa wokulamba wehla, futhi manje sekube lula ngami ukubheka isisindo. Kunezinhlobo ezintathu zamavithamini emabhulashini, futhi ngayinye kufanele ithathwe kanye ngosuku. Hhayi elula kakhulu.
I-Vervag Pharma iyinkimbinkimbi ye-prophylactic ye-zinc, chromium namavithamini ayi-11.
U-Elena Ch., Oneminyaka engama-34 ubudala, isazi sezomnotho. Ngiyagula nginesifo sikashukela. Udokotela wami we-endocrinologist ungeluleke ukuthi ngiphuze amavithamini ohlobo lwe-1 diabetesics Vervag pharm. Ngiphuza ithebhulethi elilodwa ngosuku, ngaqala ukuzizwa kahle. Kule maphilisi anginakho ukusabela okubi. Abanye bazizwa begula futhi kwadingeka ukuba baphuze kathathu ngosuku, okuyinto ephazamisayo kakhulu.
I-Doppelherz Asset iqukethe izinto ezi-4 zokulandela kanye nama-10 amavithamini. Kubekelwe ukulungiswa kwe-metabolic, ukuvimbela ukushoda kwevithamini, i-neuropathy.
UVictor P., oneminyaka engama-47, ungumakhi. Angithandi ukugwinya amaphilisi, futhi bengicabanga ukuthi amavithamini awawona aqatha. Kepha udokotela waphikelela - ngoba ngesifo sikashukela, i-hypovitaminosis iholela ezinkingeni ezinkulu kakhulu. Manje ngiphuza i-Doppelherz Active tata, ithebhulethi eyodwa ngosuku, ukuze ngingaphelelwa umbono ngenxa yomonakalo wemikhumbi ye-retina. Amathebulethi abekezelelwa kahle, angibonanga imiphumela emibi, anginakho ukuphikisana nalokhu.
Kits: Isifo sikashukela seComplivit kanye neCalcium DZ. Ezinye izinto eziyinkimbinkimbi zingandisa ushukela wegazi, ngakho-ke noma iyiphi i-complex ibekwa kuphela yi-endocrinologist.
U-Anna T., oneminyaka engama-35, umphathi. Ngifuna ukukutshela ukuthi sekuyiminyaka emithathu manje ngiphuza (njengoba kuchazwe udokotela wami we-endocrinologist) i-Complivit Diabetes. Izinzuzo zenkimbinkimbi:
Ithebhulethi eluhlaza eyindilinga iqukethe ama-60 mg we-ascorbic acid,
i-magnesium, i-zinc, i-chromium (ethintekayo kulawulo lwe-glucose egazini),
i-selenium (ibonisa izakhiwo ezibalulekile ze-antioxidant),
i-folic, i-lipoic acid,
amavithamini PP, E, iqembu B,
Ukukhishwa kwe-Ginkgo Biloba (kuthuthukisa ukumuncwa kwe-glucose, kuthuthukisa ukusebenza kobuchopho).
I-Komplivit D ilungele ukuthi udinga ukuphuza kuphela iphilisi ngosuku.
Ukwelashwa ngama-Vitamin isixhumanisi esibalulekile, kanye nokwelashwa kwezidakamizwa kanye nokudla okufanele, ekwelapheni isifo sikashukela.Awukwazi ukuthatha ama-vitamin complexes ngokungalawuleki. Isazi se-endocrinologist, kuya ngohlobo lwesifo, sinquma amavithamini ohlobo 1 sikashukela noma amavithamini onhlobo 2 sikashukela. Ukusetshenziswa okuhleliwe kwe-vitamin complexes ngokuya ngohlelo olunqunywe yi-endocrinologist kuqinisekisa ukwelashwa okuphumelelayo kanye nokuvinjwa kwezinkinga zesifo sikashukela.
IDoppelherz iyisengezo sokudla. Kubandakanya nenkimbinkimbi yamavithamini namaminerali enza kuzinze ukulinganisela kwe-carbohydrate emzimbeni. Umuthi usiza ukuthuthukisa inhlala-kahle yesiguli, uzinzisa izinqubo ze-metabolic.
Isifo sikashukela yisifo esibi sohlelo lwe-endocrine. Ngenxa yokuntuleka noma ukwelashwa okungafanele, zonke izitho ziyahlupheka. Kepha, ngisho nazo zonke izincomo zikadokotela, uma kungekho ukusekelwa kwevithamini, kuvela izinkinga:
Ushukela wegazi ophakeme wenza imithambo yegazi ibe buthakathaka, futhi ukuvela okungazelelwe kushukela kubhebhethekisa isimo esivamile sesistimu yenhliziyo.
I-glucose ethe xaxa inomthelela ekwakhiweni kwama-radicals wamahhala. Ukuvuselelwa kwamaseli kuyancipha, umzimba uthathwa izifo.
Isifo sikashukela, inani lokuchama liyanda. Ukukhuphuka okwengeziwe kokuphuma koketshezi kuphakamisa ukususwa kwezakhi zomzimba emzimbeni. Izinso ziyahlupheka.
Ukwanda kweshukela kuphakamisa umbono.
Ukudla okungenampilo akunasandla ekwakhiweni kwezinto ezibalulekile. Umzimba utholakala kalula ezinhlungwini zangaphandle nezifo.
I-Doppelherz imiselwe ukuvimbela ukushoda kwe-Vitamin. Ukuba khona kwe-selenium ne-magnesium kunciphisa ubungozi bokuthola izifo zohlelo lwethambo nenhliziyo. Ngokusetshenziswa njalo komuthi, amakhompiyutha e-bioactive ayavuselelwa abuyisa izinqubo ze-metabolic emzimbeni.
Izici zokwelapha zomuthi:
Iguqula uhlelo lwezinzwa
isiza ukuzinzisa ibhalansi yamakhompiyutha we-enzymatic ne-non-enzymatic wohlelo lokuvikela lwe-antioxidant,
qinisa izindonga zemithambo yegazi, akhuphule ukuqina kwawo,
kwandisa umsebenzi we-erectile emadodeni.
Umuthi i-Dopel Hertz uyatholakala ngesimo samathebulethi ahlanganiswa nokuhlanganiswa kokudla. Amacwecwe abekwe emabhulini, izingcezu eziyi-10 kwiphakethe elilodwa lepulasitiki. Amabhola anezibhebhe agcwele emabhokisini amakhadibhodi. Inani lamathebhulethi ebhokisini linye izingcezu ezingama-30 noma ezingama-60. Ibhokisi lomuthi lanele enkambweni yokwelashwa.
Umuthi webhayoloji uqukethe izinhlobo zamavithamini nezakhi ezithinta kahle wonke umzimba wesifo sikashukela. Ithebhulethi eyi-1 iqukethe izakhi zomkhondo eziyi-14 ezizuzisayo:
i-magnesium oxide (kufika ku-200 mg),
uvithamini B6 (kufika ku-3 mg),
i-zinc gluconate (5 mg),
I-selenite (39 mcg),
I-3 chromium chloride (60 mcg),
i-pantothenic acid (6 mg),
i-nicotinic acid amide (18 mg),
i-folic acid (450 mcg),
i-microvitamin biotin (150 mcg),
Vitamin B12 (9 mcg)
Vitamin B2 (1.6 mg)
Vitamin E (42 mg)
Vitamin C (200 mg).
Amavithamini e-B adlala indima enkulu ekusebenzeni okujwayelekile komzimba:
ukuqinisa isistimu yezinzwa, sisize ukubhekana nengcindezi nokuxineka kwemizwa,
thuthukisa isimo sesikhumba,
ubambe iqhaza ekwakheni kabusha amaseli.
Amavithamini C no-E asusa ama-radical mahhala aqeda amaseli emzimbeni wesifo sikashukela, awahlanze ubuthi. I-Ascorbic acid ibandakanyeka ekuhlanganiseni kwe-collagen ne-adrenaline, okuvumela umzimba ukuthi ubhekane nezimo ezicindezelayo zomzimba.
I-Zinc ithuthukisa ukungatheleleki, ithuthukisa umzimba, ithuthukisa ukwakheka kwamangqamuzana egazi. Ngenxa ye-zinc, izinqubo zokululama emzimbeni zishesha. Le nto yokulandela isiza ukuguquguqula umbono wesifo sikashukela.
I-Folic acid ibandakanyeka ohlelweni lokuvuselelwa kwegazi, ithuthukisa ukungatheleleki komzimba. Ukuntuleka kwe-acid kukhuthaza i-anemia, inzalo, ukuguquguquka kwemizwelo.
I-Pantothenic acid (i-Vitamin B5) ibandakanyeka ekubuyiselweni kwamaseli, isiza ukuguquguquka kwe-metabolism. IVithamini B5 isiza ukuthuthukisa ukungatheleleki, ithuthukise isimo sezinwele namazipho. I-Acid isiza ukwehlisa isisindo.
I-Magnesium ibandakanyeka ezinqubweni eziningi ze-metabolic emzimbeni futhi ilawula amazinga kashukela wegazi. Amaminerali alawula umsebenzi wenhliziyo, aqinisa izindonga zemithambo yegazi futhi ajwayele nomfutho wegazi.
I-Doppelherz akusona isidakamizwa esizimele. Kunqunywe ngokuhlanganiswa nezidakamizwa eziyisisekelo zikashukela ukuzinza isiguli. Umthamo wansuku zonke weDoppelherz wesifo sikashukela yi-1 ithebhulethi. Kuthathwa isikhathi esingu-1 ngosuku. Phuza amanzi amaningi. Umuthi wenqatshelwe ukuqeda nokuhlafuna. Kwezinye izimo, kungenzeka ukuthatha izikhathi ezi-2 ngosuku, ithebulethi ½ ngomthamo ngamunye.
Gcina umuthi endaweni emnyama ongafinyeleleki ezinganeni ngamazinga okushisa angadluli ku-25 ° C. Impilo ye-Shelf ayisekho iminyaka emi-3. Ikhishwa ngaphandle kwencwadi kadokotela. Intengo yeDopel Hertz isuka kuma-ruble ayi-180 kuye kwangama-450, kuye ngenani lamathebulethi.
I-vitamin tata inqunywa ngokuhambisana nokwelashwa okuyinhloko kwesifo sikashukela. Umuthi uqobo awunawo iqhaza ekululameni. Ngempatho efanele yesifo sikashukela, umphumela we-Doppelherz nezidakamizwa uyathuthukiswa kuyinkimbinkimbi.
Lapho ubala umthamo we-insulin, ukuthatha i-vitamin tata kuyabhekwa. Ithebhulethi eli-1 = iyunithi eli-1 lesinkwa.
I-Vitamin tata ifaka kuphela izakhi zomkhondo ezilusizo emzimbeni. Isidakamizwa cishe asinaziphikiso. Odokotela abancomi ukusetshenziswa kwemithi yezigaba ezi-3 zeziguli:
abantu ababekezelela abathile ezintweni ezisebenzayo zesengezo,
kubantu abangaphansi kweminyaka engu-12 ubudala, kuze kube yiminyaka eyi-12 yokuqokwa kokudla i-Vitamin kuyaxoxwa nodokotela wakho,
abesifazane abakhulelwe noma abancelisa ibele.
Umthamo wansuku zonke wesidakamizwa 1 ithebhulethi ngosuku. Ukweqisa umthamo kuphakamisa izimpawu:
ukunambitheka okungathandeki emgodini womlomo,
ukusabela kwe-hypersensitivity ngesimo se-pruritus,
ukuphazamiseka kwendlela yomgudu esiswini.
Ngokungezelela kwama-vitamin complexes, okubandakanya izinto ezimbalwa zokulandela umkhondo ezidingekayo kwisifo sikashukela, izidakamizwa eziqukethe into eyi-1 esebenzayo zinqunyelwe:
Ifa leSelenium ngombono - liqukethe i-selenium e-retinal,
I-Ascorbic ephethe ushukela - iqukethe uvithamini C, osekela imikhumbi ethoni,
I-Tocopherol - iqukethe uvithamini E, osusa ubuthi emzimbeni,
I-Maltofer yisidakamizwa esine-iron-aqukethe i-anemia,
I-Zincteral - iqukethe i-zinc, esiza ekuvuseleleni uhlelo lwethambo nenhliziyo.
Ngaphezu kwezidakamizwa ezikhethekile, kunqunywa ama-Vites complexes - Doppelherz analogues:
I-Alphabet Diabetes - amavithamini waseRussia kwabanesifo sikashukela. Kwamukelwe izikhathi ezi-3 ngosuku.
Isifo sikashukela se-complivit - isengezo esiyinkimbinkimbi sokudla. Kuthathwa isikhathi esingu-1 ngosuku. Inokwakheka kabi kwamaminerali kanye nesigaba samanani aphansi.
IFervagPharma isidakamizwa saseJalimane. Ukusetshenziswa okwengeziwe kwamaminerali analesi sidakamizwa kunconyiwe.
Kwabashukela - amavithamini ayinkimbinkimbi. Ngokubambisana, amaminerali angeziwe angabekwa.
IVitacap "- iqukethe izinto eziyi-13 ezisebenzayo. Okufanayo kusebenza kuma-Doppelgerts.
Sengiphile nesifo sikashukela iminyaka engu-15. Kwaphuka njalo amalunga, nezifo ze-catarrhal zinamathela. Eminyakeni engu-2 edlule, udokotela wanquma i-Doppelherz. Wathola inkambo yokwelashwa futhi akazange aqaphele ukuthi lobuhlungu bokuhlangana buhamba kanjani. Wagula wama. Ngithatha isifundo se-vithamini izikhathi ezi-2 ngonyaka. Ujabule kakhulu ngomphumela.
UTatyana Alexandrovna, oneminyaka engama-57
Nginoshukela onesipiliyoni. Sekuphele iminyaka engu-9 ngihlala nalesi sifo. Ngiphuza amavithamini e-Doppelherz. Ngemuva kwenkambo yokuthatha, ngizwa ukuqina kwamandla, impilo yonke iyathuthuka. Ngokwesincomo sikadokotela, ngiphuza amavithamini ekwindla nasentwasahlobo.
UValery Sergeevich, oneminyaka engama-44
Ukudla nezidakamizwa eziqukethe i-insulin kuyisisekelo sokwelapha nokugcina impilo yesifo sikashukela. Kepha ukudla okulinganiselwe kunomthelela ekuntulekeni kwezakhamzimba namavithamini. Ukwelashwa okuyinhloko kudinga ukuqokwa kwenkambo yenkimbinkimbi yamavithamini. IDoppel Hertz izonxephezela ukuntuleka kwezinto ezilandelwayo emzimbeni womuntu, ithuthukise inhlala-kahle futhi ibuyise ukusebenza kwezitho zomzimba.
Ukwakheka kuka-vitamin-mineral complex "Doppelherz"
Ukwakheka kwesidakamizwa "Doppelherz" kuqukethe amavithamini kanye namaminerali alandelayo:
Amavithamini we-B - B12 (0.09 mg), B6 ​​(3 mg), B1 (2 mg), B2 (1.6 mg).
I-Pantothenate - 6 mg.
I-Magnesium oxide - 200 mg.
ISelenium - 0,39 mg.
I-Chromium chloride - 0,6 mg.
I-Zinc gluconate - 5 mg.
ICalcium pantothenate - 6 mg
Ukwakheka kwalesi sidakamizwa "Doppelherz" kuklanyelwe ngendlela yokuthi izinto zakhona zenze izidingo zomzimba zesifo sikashukela.
Lesi sidakamizwa asisiwo umuthi, kepha siyisengezo sokudla esisebenza ngokudla okunempilo esondla umzimba ngenani elifanele lezakhamzimba, okuthi ngalesi sifo asilutholi ngokudla.
I-Vitamin tata isiza ukuvikela izinkinga zesifo sikashukela ngendlela yokulahleka kombono, ukusebenza kahle kwesistimu yezinzwa nezinso. Izimbiwa zivimbela ukubhujiswa kwama-microvessels, kumisa ukuthuthukiswa kwezifo ezihambisana nesifo sikashukela.
Izindleko ze-Doppelherz vitamini-mineral tata ziyahlukahluka kusuka kuma-ruble angama-355 kuya kwangama-575, ngokuya ngenani lamathebulethi amaphakethe. Isithasiselo esisebenza ngezinto eziphilayo sikhiqizwa eJalimane yinkampani iKvayser Pharma GmbH neCo.
Ngabe kugaywa kanjani ama-carbohydrate? Yini ebalulekile ukwazi ngesifo sikashukela?
Imaphi ama-regulin we-insulin regimens akhona? Yikuphi kuzo ezithandeka kakhulu emzimbeni futhi iziphi izinto ezimbi ezikhona?
Ingabe ushokoledi wabanesifo sikashukela uyindathane? Ungayikhetha kanjani ushokoledi "ongakwesokudla" futhi kukhona yini imikhawulo?
Isenzo se-Pharmacological kanye nezincomo zomthamo
Amavithamini kanye namaminerali ayingxenye yokulungiselela kwe-Doppelherz akhulisa ukumelana komzimba kuma-virus nama-microorganisms. Ngosizo lwawo, kungenzeka ukuthi aqinise amasosha omzimba futhi enze ukusilela kwezinto ezidingekayo kumuntu onesifo sikashukela:
Amavithamini e-B - anika umzimba amandla futhi unesibopho sokulingana kwe-homocysteine ​​emzimbeni, esekela impilo yesistimu yenhliziyo.
I-Ascorbic acid ne-tocopherol - khipha ama-free radicals emzimbeni, owakhiwa ngamanani amakhulu emzimbeni onesifo sikashukela. Lezi zinto zivikela amaseli, zivimbela ukubhujiswa kwawo.
I-Chromium - inikezela ukwesekelwa kwamazinga kashukela ajwayelekile egazini futhi ivimbele ukwakheka kwamafutha, ivimbela ukuthuthukiswa kwe-atherosclerosis nesifo senhliziyo, futhi isuse ne-cholesterol egazini. Le nto ivimbela ukufakwa kwamafutha emzimbeni.
I-Zinc - yakha ukungatheleleki futhi inesibopho sokwenza ama-enzyme anikezela nge-metabolic acid metabolism. Lesi sakhi sithinta kahle izinqubo zokwenziwa kwegazi.
I-Magnesium - ibamba iqhaza ezinqubweni ze-metabolic, yehlise umfutho wegazi futhi isebenze ekwenzeni ama-enzyme amaningi.
Thatha umuthi "Doppelherz" kufanele unqunywe kuphela yi-endocrinologist, uqaphele ngokuqinile umthamo othuthaziwe
Kufanele uphuze ithebhulethi engu-1 nsuku zonke ngokudla, uphuze amanzi amaningi ngaphandle kokuhlafuna. Inkambo yokwelashwa kokugcinwa kwezinsuku ezingama-30. Esikhathini sikashukela sohlobo lwesibili, ukusetshenziswa kwe-Vitamin tata kuyimpoqo kuhlanganiswe nokwenziwa kwezidakamizwa ezinciphisa ushukela.
Ukufana kwezidakamizwa "Doppelherz"
Ama-analogues adume kakhulu we-vitamini "Doppelherz" alandelayo:
I-Diabetesiker vitamine - Ithebhulethi eyi-1 iqukethe izithako ezisebenzayo eziyi-13. Umuthi ukhiqizwa eJalimane nguVerwag Pharma. Ithebhulethi ngayinye iqukethe ukudla nsuku zonke kwamaminerali kanye namavithamini adingekayo ngohlobo 1 nohlobo 2 lwesifo sikashukela.
I-Diabetes Alphabet -Iqukethe izinto ezidingekayo zokulandela umkhondo namavithamini okwakha ukushoda kwezakhamzimba emzimbeni weziguli ezinesifo sikashukela. Kukhiqizwa inhlanganisela yamavithamini eRussia futhi ayinamphumela ongemuhle.